Mnangagwa takes oath as Zimbabwean President - Daily Mirror - Sri Lanka Latest Breaking News and Headlines
Mnangagwa takes oath as Zimbabwean President
THE HINDU, 26th AUGUST, 2018-Emmerson Mnangagwa took the oath as Zimbabwe’s President in front of a stadium crowd on Sunday after a divisive election, as U.S. observers of that vote questioned the country’s democratic credentials.
The Constitutional Court confirmed Mr. Mnangagwa as President in a ruling released on Friday, dismissing a challenge by the man he defeated in the July 30 ballot, opposition leader Nelson Chamisa.
Thousands of people, some bussed in from outside the capital, and foreign leaders gathered at Harare’s national stadium for the swearing-in of Mr. Mnangagwa, who just secured the 50 percent of votes he needed to avoid a runoff against Chamisa.
The election was touted as a crucial step towards shedding the pariah reputation Zimbabwe gained under Mr. Mnangagwa’s predecessor Robert Mugabe, and securing international donor funding to revive a crippled economy.
But hours before Mr. Mnangagwa’s inauguration, the International Republican Institute and National Democratic Institute said the country lacked a “tolerant democratic culture” in which political parties were treated equally and citizens allowed to vote freely.
The election was marred by procedural lapses and followed by an army crackdown against opposition supporters, undermining promises that Mr. Mnangagwa made during campaigning to break with the corruption and mismanagement that become endemic under Mr. Mugabe.